သင့်မိဘတွေအတွက် ဒီအချက်တွေထဲက သင်ဘာတွေလုပ်ပေးပြီးသွားပြီလဲ ? – Trend.com.mm
သင့်မိဘတွေအတွက် ဒီအချက်တွေထဲက သင်ဘာတွေလုပ်ပေးပြီးသွားပြီလဲ ?
Posted on November 10, 2017 by Noel
မိဘတွေကသားသမီးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတာကိုဖြည့်ဆည်းပေးချင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်သလို သားသမီးတွေကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ မိဘတွေအပေါ်ပြန်ပြီးနွေးထွေးစွာစောင့်ရှောက်ပေး ရပါမယ်။တစ်ခါတစ်လေ အမေက သူ့အတွက်ဘာမှမ၀ယ်ပဲနဲ့သားသမီးတွေကိုဦးစားပေးပြီး သားသမီးတွေလိုချင်တာကိုပဲ ၀ယ်လာပေးကြတာကို သတိထားမိကြမှာပါ။
သားသမီးတွေကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ အမေ၊အဖေအပေါ်မှာ ပြန်ပြီး အလိုက်တသိနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးချင် ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ မိဘတွေဆိုတာ ကိုယ့်သားသမီးက ကိုယ့်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးဝယ်လာတဲ့လက်ဆောင်လေးတွေရရင် ဘယ်လောက်ပဲတန်ဖိုးနည်းနည်း အရမ်းပျော်ကြပါတယ်။တခြားသူတွေကိုလည်း ကြွားလို့မဆုံးဘူးပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ အမေ၊အဖေတွေကျေနပ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးသွားစေမယ့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့…
မိန်းကလေးတိုင်းအလှကြိုက်တတ်သလို ကိုယ့်ရဲ့အမေကလည်း လှပတဲ့မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ဆံညှပ်လှလှလေးက ဘယ်နေရာသွားသွား အမြဲပါနေမှာဖြစ်သလို ကိုယ့်အမေကိုလည်းပိုပြီးလှပတင့်တယ်စေမှာပါ။
နာရီကတော့ အဖေ့အတွက်မရှိမဖြစ်ပေါ့။ဖုန်းမှာနာရီပါပေမဲ့ လူကြီးဆန်ဆန် နာရီလေးကြည့်တော့ ပိုပြီး ကြည့်ကောင်းစေပါတယ်။နာရီရှိပေမဲ့လည်း ကိုယ့်သားသမီးက ချစ်ခင်လို့ဝယ်လာပေးမယ် ဆိုရင် ချက်ချင်းလဲပတ်မယ့်မိဘတွေပါ။
ဒါကအမေ့အတွက်၊ဒါကအဖေ့အတွက်ဆိုပြီး သီတင်းကျွှတ်ကန်တော့တာမျိုးမဟုတ်ပဲ ၀ယ်လာပေးပါ။ ကိုယ်ငယ်ငယ်တုန်းက ကိုယ့်အတွက်လိုက်ဖက်တဲ့အ၀တ်အစားတွေ ဆင်ပေးခဲ့တဲ့သူက အမေနဲ့အဖေပါ။အခု ကိုယ်ကပြန်ပြီးလိုက်ဖက်တဲ့အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ဆင်ပေးရမှာပါ။
အမေက ကိုယ့်လိုမျိုးတော့ အလှအပပစ္စည်းမျိုးစုံသုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အတွက်ဈေးသင့်တင့်ပြီး စိတ်ချရတဲ့မိတ်ကပ်ပစ္စည်းကောင်းကောင်းလေး တစ်စုံဝယ်ပေးထားပါ။သင့်ရဲ့ အမေကလည်း ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းက သိပ်လှတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မှာပါ။
လူကြီးတွေပါရင်မလွတ်လပ်ဘူးဆိုပြီး အမေနဲ့အဖေကိုိအိမ်မှာပဲမထားပါနဲ့။အားလပ်ရက်မှာ မိဘတွေကိုခေါ်ပြီး လျှောက်လည်တာ၊ခရီးထွက်တာမျိုးလုပ်ပါ။မိဘတွေက အသက်ကြီးလာလေ ပိုပြီးအားငယ်လာလေပါ။သူတို့ကို အလေးထားပြီးဂရုစိုက်ပေးရင် ၀မ်းသာကြပါတယ်။
ကလေးဘ၀တည်းက ကိုယ်စားချင်တာ၊ကိုယ်လိုချင်တာ အမေနဲ့အဖေကပဲ ၀ယ်ပေးခဲ့တာ မဟုတ်လား။အရွယ်ရောက်တော့လည်းအနောက်ကနေ ပံ့ပိုးကူညီပေးနေရတုန်းပါပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့်သားသမီးတွေကလည်း မိဘတွေအတွက် သီးသန့်ဝင်ငွေအဖြစ် ဘဏ်ကတ်လေးဖြစ်ဖြစ်လုပ်ထားပေးသင့်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှ အလှူလုပ်တဲ့အခါလည်း ထုတ်သုံးလို့ရသလို ဘုရားဖူးခရီးတွေကိုလည်း သက်တောင့်သက်သာနဲ့သွားလို့ရမှာပါ။ နေမကောင်းတဲ့အခါလည်း အချိန်မရွေးပြသလို့ရပါတယ်။
ဒီအချက်တွေထဲက ဘယ်အချက်ကိုသင်လုပ်ပြီးသွားပြီလဲ ?
ကွန်ပျုတာအမြဲကြည့်နေရသူတွေ မျက်လုံးအားကောင်းလာစေဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းများ
Pepero Day (Valentine’s Day) မှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေရဲ့  ချောကလက်အပေးချင်ဆုံးအနုပညာရှင်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ IU နဲ့ Gong Yoo